सबका साथ, सबका बाप : श्रीमान शेरबहादुरदेउवा, जो अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री पनि हुन्, उनले केही दिन पहिला लैनचौरस्थ्ति भारतीय दूतावासमा आयोजित भारतको स्वतन्त्रता दिवस अग्रीम रुपमा मनाउने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा यसै गरेर भाषण गरेका थिए त्यसो त उनले त्यहााका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सबका साथ सबका विकास भन्ने नारा घोकाएका थिए, काठमाडौं आएकी विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजका अगाडि हाम्रा प्रधानमन्त्री एकदमै नर्वस् भए र विकास भन्नुपर्ने वाप भन्न पुगे ।
हुन त, यिनीहरुका वाप नै हुन् मोदी र स्वराजहरु । तापनि एक्लै भेटेको बेलामा भनेको भए हुन्थ्यो, दूरदर्शन र हिमालय टीभीको लाइभ प्रशारणमा देउवाको उक्त बाप शव्दले गर्दा थरिथरिका चर्चा आएको छ । धेरैले त्यहाँको भाषण सुनेर विचार गरे कि गरेनन् कुन्नी ? त्यस अवसरमा आफ्नो भाषण गर्ने क्रममा भारतकी विदेशमन्त्री सुषमा स्वरले प्रचण्डको पुरानो भनाई उधृत गर्दै तपाईहरुले मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर आफूहरुलाई भनेको कुरा आफ्नो हिन्दीमा दिएको भाषणका क्रममा उठाएपछि त्यही उपस्थिति प्रचण्डलाई पनि आफ्नो गाह्रोपन लाई हाँसोमा दबाउनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन । यहाँ उठाइएका यी दुई सामान्य कुराहरु किन पनि महत्वपूर्ण छन् भने हाम्रो अहिलेको वास्तविकता पनि यही हो । हामीले मानेका नेताले ीमान मोदीलार्य बाप मान्छन् भने हाम्रा क्रान्तिकारी नेता दिल्लीमा हाथ जोड्दै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस् भन्न पुग्छन् । त्यो त लाइभ प्रशारण भइरहेको थियो, त्यसमा काँटछाँट हुने कुरै भएन । नत्र यो वास्ताविकता थाह लाग्दैनथियो । सानो घटना भए पनि बुझ्नेलाई यति नै काफी छ ।
विहानीले आउने दिन देखाउँछ भनेझैं, प्रधानमन्त्रीका रुपमा चौथोपटक दिलली हानिन लागेका देउवाले अर्को के चैं बितण्डा मच्चाउने हुन् ? सम्झदा पनि कहालीलाग्छ ।
केही नेपाली अनुहारका भारतवादी विज्ञहरु पुरानै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् भने केही स्वतन्त्र विज्ञहरुले अहिले भारत र चीनवीच दोक्लाम प्रकरण उब्जिएको बेला नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जान नहुने सुझाव दिइरहेका छन् । हालै नेपालबाट फर्किएका चिनियाँ उपप्रम वाङ याङले पनि दोक्लाम तनावमा स्वतन्त्र रहन नेपालालई सुझाव दिएर गएका छन् । यो परिस्थितिमा भारतले देउवालाई कसरी फसाउने हुन् ?
भन्नेहरु दोक्लाम प्रकरणमा नेपालको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ भन्दैछन् । सिमानामा जोडिएको कारणले यस्तै परिस्थितिबाट भारतका ससाना छिमिेकीहरु मध्येको नेपाल पनि भारतको अतिक्रमणको सिकार भइरहेको छ, समस्या झेलिरहेको छ । त्यसो त दोक्लाम विवादित क्षेत्र हो, भुटानको हो कि चीनको ? तयो छिनोफानो हुँदै गर्ला । तर नेपाली भूभागमा जसरी भारतले बलमिच्याइ गरेको छ, त्यस हिसावले नेपालले बोल्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनआउनेछ । अझ एक अर्कोथरि विश्लेषक छन् जो चीन र पाकिस्तानसँग रुष्ट भारतले नेपाललाई अझ गतिलो मोहरा बनाउन सक्छ भनेर तर्क दिइरहेका छन्, खतरा देखाइरहेका छन् ।
अर्को महिना ब्रिक सम्मेलनमा भाग लिन चीन जान लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त भ्रमण अघि चीनलाई अझ चिढ्याउने काम चाहि नगर्लान भनेर बताउने विज्ञहरु पनि देखिएका छन् । तर पनि भारत भ्रमण गएका बखत तराई मधेसमा भारतद्वारा सिर्जित समस्या, नेपाली भूभाग डुबान हुने समस्या, १९५० को सन्धिलाई समयानुकूल हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका सन्धि सम्झौता भएका तर सिन्को नसमेत नभाँचिएका भारतले ओगटेर बसेका जलस्रोत सम्बन्धी समस्यालाई देउवाजीले दह्रोका साथ उठाउनु पर्छ भन्ने नेपालीहरुको हार्दिक हपेक्ष छ तर यो पटक पनि नपुग्ने देखिदैछ । किनभने माथि नै भनियो कि आफ्नै मुलुकमा नर्वस भएर बाप भन्नेले त्यहाँ दिल्लीमा त झन के भन्लान्, नभन्लान् ?
उही सबै नेताहरुले झैं सत्तामा टिकाइदिइरहनु पर्छ भनेर लम्पसारवाद तमासा देखाउने त होला ?
यत्तिको लागि दिल्ली दर्शनमा जान लागेका हुन् भने प्रधानमन्त्री देउवाप्रति दयामात्र गर्न सकिन्छ ।
एमालेले कामै गर्न दिएन भनेर कुरा लगाएरमात्र फर्कने हो भने देउवाको राजनीतिमा यो सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुनसक्छ । किनभने भर्खर भारतकै कारणले नेपाल बाढीको चपेटामा पर्‍यो, मधेस अर्को २० वर्ष पछि धकेलियो, ठूलो धनजनको क्षति भयो । यति ठूलो समस्या नेपालले झेलिरहेको बेलामा देशका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने र जनताको दु:ख, देशको पीडालाई एजेण्डा बनाएर बार्ता नगर्ने हो भने यिनलाई शेरबहादुर भन्ने कि भारतबहादुर ?
अहिलेसम्म नेपाली नेताहरुमाथि भारतको दलाली गरेर राजनीतिक व्यापार चलाइरहेको आरोप लागेको छ । त्यही आरोप पुन: दोहोरिनु भनेको लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो, नेपाल र नेपालीका लागि सराप नै हुनेछ ।त्यसकारण पनि प्रम देउवाको भारत भ्रमणबाट आशा नगरौं भन्नेहरुको जमात ठूलो छ । तथापि देशका प्रधानमन्त्री हुन्, ठूलो पार्टीका सभापति हुन्, कम्युनिष्टहरुबाट घेरिएका र चेपिएका छन् । यिनले प्रजातन्त्र र देशका लागि एउटा छलाङ मारिहाल्छन् कि भन्ने झिनो आश गनेृहरु पनि समाजमा देखिएका छन् । नाम शेरबहादुर, देशका लागि शेर बनिदिए भने त गजबै हुन्थ्यो ।